#ဝမ်းသာစရာသတင်း နှစ်​ဘက်​သ​ဘောတူမှုဖြင့်​ ရုပ်​သိမ်းခဲ့​သော အောင်ရဲထွေး အမှုကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်မည်…. – ရှအေလငျး
#ဝမ်းသာစရာသတင်း နှစ်​ဘက်​သ​ဘောတူမှုဖြင့်​ ရုပ်​သိမ်းခဲ့​သော အောင်ရဲထွေး အမှုကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်မည်….
​အောင်​ရဲ​ထွေး အသတ်​ခံရသည့်​အမှု့အား နှစ်​ဘက်​သ​ဘောတူ ရုပ်​သိမ်းထားသည်​ကို…နိုင်​ငံ​တော်​ဘက်​မှ ပြန်​လည်​ပြင်​ဆင်​​တော့မည်​ဖြစ်​ပါသည်​။
နှစ်​ဘက်​သ​ဘောတူမှု့ဖြင့်​ ရုပ်​သိမ်းခဲ့​သောအမှု့မှာ…ရန်​ကုန်​အ​ရှေ့ပိုင်းခရိုင်​တရားရုံး၂၀၁၈ ခုနှစ်​၊ရာဇဝတ်​မှုကြီးအမှတ်​ ၃၄ တရားလိုကိုသန့်​ဇင်​ဦးနှင့်​တရားခံသန်းထွဌ်​​အောင်​ပါ(၃) ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ၃၀၂အရစွဲဆိုမှု
ရုပ်​သိမ်းလွှာတင်​ပြသူများ ​သေဆုံးသူ​အောင်​ရဲ​ထွေး၏အစ်​ကို ကိုသန့်​ဇင်​ဦး / ​သေဆုံးသူ၏ဖခင်​ ဦးမြင့်​ဦး / ​သေဆုံးသူ၏မိခင်​ ​ဒေါ်သန်းသန်း​ထွေး / ​သေဆုံးသူ၏အစ်​ကို ​နေဇင်​လတ်​ /ရုပ်​သိမ်းလွှာတင်​ပြသူများ ​သေဆုံးသူ၏ဖခင်​၊မိခင်​နှင့်​အစ်​ကို(၂)ဦးတို့ဖြစ်​ကြပါသည်​…
​ကျေ​အေးရုပ်​သိမ်းခွင့်​မရှိ​သော…အမှု့ကြီးဆယ်​မျိုးတွင်​ နံပါတ်​တစ်​ စာရင်းဝင်​ လူသတ်​မှု့ပုဒ်​မ ၃၀၂ အားရုပ်​သိမ်းခွင့်​​ပေးခြင်းသည်​ လက်​ရှိနိုင်​ငံ​တော်​အစိုးရအား၎င်း…နိုင်​ငံ​တော်​အတိုင်​ပင်​ခံအား၎င်း…နိုင်​ငံ​တော်​သမ္မတအား၎င်း…နိုင်​ငံ​တော်​၏ တရားဥပ​ဒေစိုးမိုးမှု့နှင့်​ နိုင်​ငံ​တော်​တွင်းမှီတင်း​နေထိုင်​ကြကုန်​​သော ပြည်​သူအ​ပေါင်းတို့အား ဥပ​ဒေ၏ ကာကွယ်​​စောင့်​​ရှောက်​မှု့မှ၎င်း…
ပြည်​သူတို့မှ အထင်​အမြင်​လွဲမှားကာ ယုံကြည်​မှု့ ပျက်​ပြား​သကဲ့သို့ ဖြစ်​​စေ​တော့မည့်​ အ​ကြောင်းချင်းရာဖြစ်​ပါသည်​ ဤအ​မှု့အား…ပြန်​လည်​ပြင်​ဆင်​​ပေးရန်​ ဆုံးဖြတ်​​သော… အစိုးရတာဝန်​ရှိသူများအား၎င်း…ကျွန်​​တော်​နှင့်​တစ်​ကွ ပြည်​သူများမှ ​ကျေးဇူးအထူးတင်​ရှိပါတယ်​ခင်​ဗျာ…
မြန်​မာပြည်​၏ တရားဥပ​ဒေစိုးမိုးမှု့နှင့်​နိုင်​ငံ​တော်​တွင်း နိုင်​ငံသားများအား တရားဥပ​ဒေဖြင့်​ကာကွယ်​​ပေးမှု့တို့အား နိုင်​ငံတကာမှ လက်​ညိုးထိုးခံရမည့်​အ​ရေးမှ ကင်းလွတ်​​တော့မည်​လည်းဖြစ်​ပါသည်​။ သက်​ဆိုင်​သူတာဝန်​ရှိသူများအားလုံးကိုလည်း ​ကျေးဇူးအထူးတင်​ရှိသလို အားနည်းချက်​ရှိခဲ့​သော သက်​ဆိုင်​ရာတာဝန်​ရှိသူများကိုလည်း ​နောက်​​နောင်​ ဤသို့အ​ကြောင်းချင်းရာများ မဖြစ်​​အောင်​ ပြုပြင်​​ပေးနိုင်မည်​ဟုလည်း ယုံကြည်​ပါတယ်​ခင်​ဗျာ…
အောငျရဲထှေး အသတျခံရသညျ့အမှု့အား နှဈဘကျသဘောတူ ရုပျသိမျးထားသညျကို…နိုငျငံတျောဘကျမှ ပွနျလညျပွငျဆငျတော့မညျဖွဈပါသညျ။
နှဈဘကျသဘောတူမှု့ဖွငျ့ ရုပျသိမျးခဲ့သောအမှု့မှာ…ရနျကုနျအရှပေို့ငျးခရိုငျတရားရုံး၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ရာဇဝတျမှုကွီးအမှတျ ၃၄ တရားလိုကိုသနျ့ဇငျဦးနှငျ့တရားခံသနျးထှဌျအောငျပါ(၃) ရာဇသတျကွီးပုဒျမ၃၀၂အရစှဲဆိုမှု
ရုပျသိမျးလှာတငျပွသူမြား သဆေုံးသူအောငျရဲထှေး၏အဈကို ကိုသနျ့ဇငျဦး / သဆေုံးသူ၏ဖခငျ ဦးမွငျ့ဦး / သဆေုံးသူ၏မိခငျ ဒျေါသနျးသနျးထှေး / သဆေုံးသူ၏အဈကို နဇေငျလတျ /ရုပျသိမျးလှာတငျပွသူမြား သဆေုံးသူ၏ဖခငျ၊မိခငျနှငျ့အဈကို(၂)ဦးတို့ဖွဈကွပါသညျ…
ကအြေေးရုပျသိမျးခှငျ့မရှိသော…အမှု့ကွီးဆယျမြိုးတှငျ နံပါတျတဈ စာရငျးဝငျ လူသတျမှု့ပုဒျမ ၃၀၂ အားရုပျသိမျးခှငျ့ပေးခွငျးသညျ လကျရှိနိုငျငံတျောအစိုးရအား၎င်းငျး…နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံအား၎င်းငျး…နိုငျငံတျောသမ်မတအား၎င်းငျး…နိုငျငံတျော၏ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု့နှငျ့ နိုငျငံတျောတှငျးမှီတငျးနထေိုငျကွကုနျသော ပွညျသူအပေါငျးတို့အား ဥပဒေ၏ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှု့မှ၎င်းငျး…
ပွညျသူတို့မှ အထငျအမွငျလှဲမှားကာ ယုံကွညျမှု့ ပကျြပွားသကဲ့သို့ ဖွဈစတေော့မညျ့ အကွောငျးခငျြးရာဖွဈပါသညျ ဤအမှု့အား…ပွနျလညျပွငျဆငျပေးရနျ ဆုံးဖွတျသော… အစိုးရတာဝနျရှိသူမြားအား၎င်းငျး…ကြှနျတျောနှငျ့တဈကှ ပွညျသူမြားမှ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျခငျဗြာ…
မွနျမာပွညျ၏ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု့နှငျ့နိုငျငံတျောတှငျး နိုငျငံသားမြားအား တရားဥပဒဖွေငျ့ကာကှယျပေးမှု့တို့အား နိုငျငံတကာမှ လကျညိုးထိုးခံရမညျ့အရေးမှ ကငျးလှတျတော့မညျလညျးဖွဈပါသညျ။ သကျဆိုငျသူတာဝနျရှိသူမြားအားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျရှိသလို အားနညျးခကျြရှိခဲ့သော သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြားကိုလညျး နောကျနောငျ ဤသို့အကွောငျးခငျြးရာမြား မဖွဈအောငျ ပွုပွငျပေးနိုငျမညျဟုလညျး ယုံကွညျပါတယျခငျဗြာ…
“မင်းသားကြီး ဦးစောနိုင်(ရှမ်းပြည်) (ခ) ဦးဇင်း စန္ဒိမာရဲ့ နောက်ဆုံးအလှူ”
“၁၃ နှစ်အရွယ် ညီမအရင်းကို အဓ္ဓမပြုကျင့်မှုဖြင့် အစ်ကိုနှစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ”
မြို့ရိုး မြို့တံခါးများတွင် လူအရှင်လတ်လတ်ကို မြေတွင်းတူးမြှုပ်နှံကာ အပေါ်မှ...